Uwe akpụkpọ ụkwụ Ugg Australia - akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ, slippers, akpụ ụkwụ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ, moccasins, akpụkpọ ụkwụ
Maka ọtụtụ oge oyi, ndị inyom na-eji ejiji ejiji n'ụwa nile na-ahọrọ onwe ha akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dịka akpụkpọ ụkwụ oyi na-ekpo ọkụ n'oge nile. Nye ọtụtụ ndị, ha na akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ ndị a na-eme site na atụrụ sheepskin ma ọ bụ nṅomi ya, na-eme ka ọ bụrụ ihe dị nro. Karịsịa ukwuu kpọrọ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Ugg Australia, nke nwere ezigbo mma.
Kedu ka esi amata ọdịiche nke mbụ Ugg Australia site na ịgha ụgha?
Akpụkpọ ụkwụ si n'aka a maara nke ọma wee banye n'ụzọ siri ike ịghọ ihe mgbaba na-eme ka onyinyo nke ndị ikom na ndị inyom. Uggs kere ndị ọzụzụ atụrụ Australia. Akpụkpọ ụkwụ ndị a na-ekpo ọkụ ma dị irè, nakwa maka ọdịdị jọgburu onwe ha a kpọrọ ha dị egwu (egwu), nke e mesịrị gbanwee ghọọ aha dị ugbu a. Mgbaba nke akpụkpọ ụkwụ nke Australia a dị nnọọ ukwuu, ihe ngosi a adabaghị na ihe ọ bụla na-emepụta ejiji.
Maka ndị fashionistas chọrọ ịchọta Ugg Australia, otu ị ga-esi amata ọdịiche dị adị bụ ihe kachasị mkpa. Ọ bara uru ilebara isi ihe ụfọdụ anya, nke bụ:
N'elu akuku aka ekpe ka a na-edepụta aha, ma ọ bụrụ na ị gbanwee ya site na elu gaa na ala, agba nke logo ahụ gbanwere site na oji gaa na agba, na ụdị ọhụrụ ndị dị na akara aha e nwere nchedo.
Akpụkpọ ụkwụ mbụ nwere ike ghara dị ọnụ ala, ọ bụrụ na onye ire ere na-enye nnukwu ego, nke ahụ bụ oge iji gosipụta.
Na mmepụta akpụkpọ ụkwụ mbụ, a na-eji ajị anụ atụrụ nke na-eji anụ ahụ eme ihe, ma ọ bụrụ na a na-esi na-esite na-esi n'èzí nabata ya ma na-adọta n'akụkụ dịgasị iche, mgbe ahụ, ha ekwesịghị ịgbapụta ibe ha. Nke a bụ otu anụ ọhịa sheepskin.
Nanị ihe ndị a Ugg Australia bụ ngwaahịa na-agbanwe, dị nro mgbe a gbajiri agbaji, ọ bụ ihe siri ike maka ịgha ụgha. Ogologo nke otu ụdị ụdị a bụ 13 mm, ebe ọ bụ na ịgha ụgha ọ dị ihe dịka 7 mm.
Akwa Ugg Australia
N'okpuru akara ahụ ọ bụghị naanị na-agba ọsọ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, ma ọtụtụ ụdị ndị ọzọ akpụkpọ ụkwụ na-ere. Ihe niile nke ika Ugg Australia, nke mbụ, nwere ọnụ ọgụgụ dị elu, na-akwụ ụgwọ ha. Ụdị ahụ, nke gosipụtara onwe ya, na-emepụta ụdị nke kachasị mma ruo ọtụtụ afọ, nke ga-adịgide ruo ihe karịrị otu oge:
akpụkpọ ụkwụ dị iche iche;
akpụkpọ ụkwụ na nnukwu bootleg dị elu ma ọ bụ dị ala;
akpụkpọ ụkwụ mara mma;
ntụsara ahụ dị mma na aji;
ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ;
egwuregwu sneakers na sneakers;
akpụkpọ ụkwụ mara mma nke okpomọkụ.
Ndị na-ewu ewu n'etiti ndị fashionistas bụ uggs Ugg Australia. Ha aghọwo akwa akpụkpọ ụkwụ na ụwa dum, nke a na-ahụ maka akara a. Ha bụ ndị a pụrụ ịmata na ha nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke Fans, ma n'etiti ndị nwoke na ndị inyom. Maka ịkwa uwe kwa ụbọchị na ejiji ejiji egwuregwu bụ nhọrọ kacha mma. Ọ bụ naanị na ọ dị mkpa iburu n'uche oge oge na ọnọdụ ihu igwe:
A naghị atụ aro na ị ga-eyi Ugri site na anụ atụrụ mgbe mmiri na mmiri snow;
Ejila ihe ịchọ mma nchebe maka isi n'elu;
na oyi na oyi oyi oyi ha na-anagide nchebe site na oyi. A na-eyi akwa mkpuchi akpụkpọ anụ ma ọ bụ mmiri na-ekpuchi mmiri na-eyikarị ihe ọ bụla ihu igwe.
N'ihe nlereanya dị iche iche, ọ ga-ekwe omume ịkwanye akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị Ugg Australia. Botilions nwere àgwà ndị dị iche iche:
ha na-eme ezigbo akpụkpọ anụ nke elu mma;
ihe ntinye nke akpụkpọ anụ ma ọ bụ nke a na-agbanye n'okpuru ebe a na-emepụta ihe na-ejikarị eme ihe;
a na-emepụta akpụkpọ ụkwụ ụkwụ ụkwụ ma na traktọ ma ọ bụ nke dị larịị na ala ikiri ụkwụ, na n'elu ikiri ụkwụ dị elu;
ọtụtụ ụdị nwere ike na-eyi n'oge oyi, ha nwere ọkụ na-ekpo ọkụ nke atụrụ, nke na-echebe ụkwụ na ntu oyi siri ike;
Akpụkpọ anụ nkịtị eji mee ihe akpụ ụkwụ akpụ ụkwụ Ugg Australia bụ ndị àgwà ya dị elu.
Maka oge mgbụsị akwụkwọ, ụlọ ọrụ na-arụpụta akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị Ugg Australia na lacing. Ọ bụ nhọrọ nke otu nwanyị nke oge a nke na-ahọrọ nkasi obi kwa ụbọchị na ọnọdụ obodo ukwu. Ha na-eguzogide ọgwụ na gburugburu ebe obibi, ọnọdụ ihu igwe dị egwu. A na-eji atụmatụ ndị dị iche iche mara ha:
na-emepụta ya na mbara igwe ma ọ bụ ikiri ụkwụ n'elu ala ikiri ụkwụ;
A na-eji akwa akpụkpọ anụ eme ihe dị elu, na-atụghị anya ọnọdụ ihu igwe;
Ụdị isi, nke ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ Ugg dị n'Australia - enwere ihe ngosi, nke na-enye gị ohere ijikọta ha ọtụtụ ihe kwa ụbọchị site na ụlọ wodrobu.
Na mgbakwunye na ọkara akpụkpọ ụkwụ "Uggi", ụlọ ọrụ ahụ na-emepụta akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị Ugg Australia, ụdị akpụkpọ ụkwụ "Alaska" na lacing. A na-akwanyere ha ùgwù site na njirimara ndị a:
Ọ bụghị nanị site na suede ka a na-emepụta ngwaahịa, kamakwa site n'omume anụ ahụ dị elu;
ụdị oyi nke akpụkpọ ụkwụ Ugg mbụ Australia na-amaghị ihe analogs na njirimara-echekwa njirimara;
ụdị "oyi nke Europe" na nke a na-egbuke egbuke, na-echetara akpụkpọ ụkwụ jockey, - ihe ọhụrụ, nke ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara n'afọ gara aga;
onye nwere ike nwere ihe pụrụ iche na logo;
onye ahụ nwere ike siri ike n'elu, ọ na-adaba n'ọnọdụ dị egwu na-egbochi slipping.
Ụlọ ọrụ ahụ na-etinye aka na imewe, mmepe na mmepụta akpụkpọ ụkwụ egwuregwu n'okpuru aka ya. A na-eji polkeredy na sneakers ụmụ nwanyị Ugg Australia na-agbaso ụkpụrụ kachasị elu, nke e gosipụtara n'ihu ọnụma ndị a:
naanị nke ndị sneakers na-eme nke roba compressed, nke na-enye ka mma jide na mpi, na a pụrụ iche egwuregwu na-ekpuchi stadium na ụlọ nkwari akụ;
a na - ahụkarị ụkwụ dịka nke anatomically, nke na - enye nkesa kachasị mma ka ị na - agba ọsọ ma na - egwu egwuregwu;
akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ Ugg Australia nwere ma lacing, na akwa ákwà, na-edozi ụkwụ.
Dị oke mma ala maka ụbọchị ọ bụla ga-abụ moccasins Ugg Australia na aji. Ha na-ejikọta nkasi obi na ọdịdị mara mma, ịdị nro na ngwa ngwa. Ụlọ ọrụ ahụ mepụtara ụzọ abụọ nke moccasins:
"Milan", nke a na-eji mpi na-eme nke ọma ma ọ bụ nubuck ma ọ bụ nke a na-ahụ anya, na-enye ohere ikesa ibu site na ụkwụ.
"Suzette", nke kachasị mma na gburugburu ebe obibi, dị ka onye na-eme ka ikiri ụkwụ na-eji atụrụ sheepkinkin, ma dị ka ihe ndozi - jute braid.
A na-enye ndị isi nke moccasins n'ụdị dịgasị iche iche, site na aja aja mara mma na-egbuke egbuke. Mmiri na-acha uhie uhie na burgundy na-ewu ewu.
Na-akpụ akpụ Ugg Australia
N'ọtụtụ ụdị slippers Ugg Australia, ma ụdị abụọ dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche n'ụdị mpempe anụ dị nro na aji na aji vatnamok. A na-emepụta slippers ma mee ka ha cheta n'eziokwu na mgbe ụbọchị zuru ezu, ụkwụ nwere ike zuru ezu. A na-eji atụmatụ ndị a akọwa ha:
Na akpụkpọ ụkwụ ndị dị otú a, a naghị eji ihe ndị siri ike na-eme ihe, nke ahụ na-adịkwa nro;
elu nwere ike isi na ya na akpụkpọ anụ ma ọ bụ akpụkpọ anụ, na n'ime e nwere ajị anụ;
Nhọrọ ọzọ bụ ngwaahịa zuru ezu na ngwaahịa na elu na akụkụ dị nro.
Akpụkpọ ụkwụ Ugg Australia
Maka oge okpomọkụ, akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị Ugg Australia bụ ihe dịgasị iche iche nke akpụkpọ ụkwụ:
na obere mpempe akwụkwọ na n'elu ihe e ji akpụkpọ anụ akpụ. Akụkụ nke elu bụ nke na-emeghe, na-agụnye ọtụtụ obosara;
on hemp wedge with suede or leather top. Ebe dị elu nke dị na osisi pịrị ọnụ adịghị emepụta ibu dị mkpa na ụkwụ;
ụdị dịgasị iche iche na mmepụta ihe dị iche iche na-eme ka akpụkpọ ụkwụ bụghị naanị na ọ dị mma, kamakwa ọmarịcha uwe ejiji akwa maka okpomọkụ;
agba nke elu na mkpirisi nwere ike ijikọta ma ọ bụ dị iche, na-ahapụ ọdịiche dị iche n'etiti ha.
Uwe ejiji agbamakwụkwọ 2016
Mgbụsị akwụkwọ outerwear 2013
Ejiji ejiji - oge mgbụsị akwụkwọ oyi-2015-2016
Uwe ejiji - okpomọkụ 2014
Egwuregwu ejiji 2013
Uwe uwe Office 2013
Agba agba agba nke oge 2016
Akpụkpọ ụkwụ ejiji nwanyị 2013
Uwe na nro n'okpuru ikpere
Taylor Swift natara $ 1 site na mbụ DJ
Kedu otu esi ahọrọ nche anwụ?
Nri na tebụl maka nwata
10 ụzọ ndị a na-atụghị anya ha ga-eji ezute nha
Mirror na-eche ihu ụzọ - ụzọ mgbaàmà Russia
Jirinụ aka gị
Kedu ihe ị ga-eme na ọnya?
Ụlọ dị na Czech Republic
Ọcha mgbaaka ọla edo
Enwere ike maka nne na-elekọta nwa nke pears?
Foto nke ụbọchị ahụ: Kim Kardashian boro isi iyi dị egwu na osimiri Malibu
Natalie Portman nke ugboro abụọ ga-aghọ nne
Ihe ngosi nke ihe omuma
Mmeputakwa nke guppies
Kedu ka esi etinye nkwekọrịta n'ụzọ ziri ezi?
Ejiji ejiji - Mmiri-Ọgwụgwụ 2016 Ụdị